पत्रपत्रिका « Dhankuta Khabar
सरकारले दिँदै आएको शिक्षक कोटा नै गायव भएपछि…
भक्तपुर । सरकारले दिँदै आएको शिक्षक कोटा नै गायव भएपछि भक्तपुर ईन्द्रियणी स्थित (सीबीआर) समुदायमा आधारित पुनःस्थापना केन्द्र मा विशेष एवं समावेशी शिक्षा ग्रहण गरिरहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भबिष्य अन्यौलमा
एउटा वडाबाट अर्कोमा जान कर तिनुपर्ने
रौतहट : नेपालको संविधानले हरेक नेपालीलाई विनारोकतोक आवागमनको हक प्रदान गरेको छ तर रौतहटको एउटा नगरपालिकाले आफ्नै एउटा वडाबाट अर्कोमा जानकर तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले एउटा वडाबाट
वायु सेवा निगमलाई किस्ता तिर्नै सकस, चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँमा घाटामा जाने अनुमान
काठमाडौँ । काठमाडौं लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्नै लक्ष्यसहित अघिल्लो वर्ष निकै तामझामसहित भित्र्याइएका दुईवटा वाइड वडी खरीदको तेस्रो किस्ता तिर्नुपर्ने समय एक साता पनि बाँकी छैन । गत
देशभर बाढी र पहिरोको विनाशः काठमाडौंको व्यवस्थित कोलोनीमै बाढी
काठमाडौं, असार २८ । कुलेश्वरको व्यवस्थित ओरियन्टल कोलोनीभित्र नै बाढी पसेर भुइँतला डुबानमा पर्‍यो । यीसँगै भक्तपुरको राधेराधे र ललितपुरको पाटन क्षेत्रका बाढीपीडितलाई सशस्त्र प्रहरीले बोटबाट उद्धार गर्‍यो। यो खबर आजको
काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीको अर्को दादागिरी !
काठमाडौं । काठमाडांै महानगरपालिका नगर प्रहरी भाडाका गुण्डा जस्तै प्रयोग भइरहेका छन् । पावर र पैसावालाहले जे भन्यो त्यही गर्छन् । सर्वसाधारणलाई घर बनाउन दिएको अदालतको आदेश समेत मान्दैनन् महानगरका
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता : परामर्शमा मात्रै ४ करोड खर्च
काठमाडौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्राधिकरणका आफ्नो कर्मचारीले गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि परामर्शदातालाई लगाएर लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको
स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा राष्ट्र संघसम्म पुर्‍याउन सक्ने आधार भेटियो
काठमाडौं । सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुर्‍याउन सक्ने आधार भेटिएको छ । राउत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजी थालिसकेको यूएनपीओको सदस्यताले देखाएको छ ।
सस्तो चामल महंगो ठगी, दुर्गमका जनतालाई बोरामै बर्सेनि डेढ करोड यसरी ठग्छ खाद्य संस्थान
काठमाडौं । खाद्य संस्थानले मुलुकका कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा चामल बिक्री गर्दा बोराको समेत शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। जिल्लाबाट धान खरिद गर्दा, मिलबाट कुटानी गरेर चामल लिँदा र जापानी
लागू औषध कारोबारका लागि यसरी ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गाईघाट
उदयपुर । उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट, कटारी, बेल्टार, रामपुर, मुर्कुचि, नेपालटार, साउने बजार लागू औषध कारोबार तथा सेवनका लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गएको पाईन्छ । पछिल्लो समय सदरमुकाम गाईघाटबाट, नेपालटार, मुर्कुचि,
बहराइन हिँडेका ढालबहादुरको सपना ह्विलचेयरमै खुम्चियो
काठमाडौं। साँच्चै जीवन सोचेजस्तो नहुने रहेछ! यदि सोचेको जस्तै जीवन हुँदो हो त, यतिबेला बहराइन गएर श्रम बेचेरै भएपनि परिवारलाई खुसी दिन सक्थे होलान् ढालबहादुर बस्नेत। अनि, मुटुको रोग लागेर